နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု | Forest Department
Home » နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု တင်ပြချက် သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု တင်ပြချက် နောက်ခံသမိုင်း ၁။	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းရှိ အပူပိုင်းမုတ်သုန် သစ်တောဂေဟစနစ် များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (ယခင်သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာန)က အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၀၅ ထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂။	တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းစီမံကိန်းသည် မုတ္တမဓါတ်ငွေ့ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ (Mottama Gas Transportation Company- MGTC)၊ တနင်္သာရီပိုက်လိုင်း ကုမ္ပဏီ (Taninthayi Pipeline Company-TPC)နှင့် အက်ဒမန်ပို့ဆောင်ရေးလီမိတက် (Andaman Transportation Limited-ATL)တို့မှ တစ်နှစ် လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅၀,၀၀၀ (လေးသိန်းခွဲ)နှင့် စီမံကိန်းကာလတစ်ခု (၄နှစ်)အတွက် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၈ သန်း)နှင့် နိုင်ငံတော်မှထည့်ဝင်ငွေ(In Kind) ကျပ် (၁၅၄)သန်းဖြင့် သစ်တောဦးစီး ဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နှစ်ရှည် စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၃။	စီမံကိန်းအား ၂၀၀၅-၀၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၀၃၄-၃၅ ခုနှစ် အထိ နှစ်(၃၀) ဆောင်ရွက် သွားရန် ရည်မှန်းထားရှိပြီး ပထမ (၄) နှစ် စီမံကိန်းအား (၂၀၀၅-၀၆ မှ ၂၀၀၈-၀၉) အထိ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ (၄)နှစ် စီမံကိန်းအား (၂၀၀၉-၁၀ မှ ၂၀၁၂-၁၃) အထိနှင့် တတိယ(၄) နှစ်စီမံကိန်းကာလအား (၂၀၁၃-၁၄ မှ ၂၀၁၆-၁၇)အထိ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ စတုတ္ထ (၄)နှစ် စီမံကိန်းကာလ (၂၀၁၇-၁၈ မှ ၂၀၂၀-၂၁)၏ စီမံကိန်း တတိယနှစ် (၂၀၁၉-၂၀)အဖြစ် သတ်မှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း ၄။	တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့နယ်နှင့် ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း ထားဝယ်မြစ်နှင့် ထိုင်း/မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အကြား တည်ရှိပါသည်။ လူဝိုင်းကြိုးဝိုင်း (၂၀၈,၂၄၀) ဧကနှင့် ဟိန်းဇဲ-ကလိန်အောင်ကြိုးဝိုင်း(အပိုင်း) (၂၁၁,၈၃၆.၈ဧက) တို့ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာ ၁,၇၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၂၀,၀၇၆.၈ ဧက ) ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ၅။	စီမံအုပ်ချုပ်မှုအနေဖြင့် စီမံကိန်းဧရိယာအား အမာခံထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ၃၃၆,၉၁၂ ဧက (၈၀%)၊ ကြားခံထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ၇၉,၉၅၂ ဧက (၁၉ %)နှင့် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ ၃,၂၁၃ ဧက (၀.၇၇ %)တို့အဖြစ် သတ်မှတ်၍ စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၆။	သဘာဝကြိုးဝိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်လျင်မြန်မှု ရှိစေရန် အတွက် အလယ်စခန်း၊ ရာဖူး၊ မရမ်း ချောင်း၊ မိကျောင်းလှောင်း၊ ကျောက်ရှပ်၊ ရေပုံး၊ ဟိန္ဇဲ၊ သက္ကယ် ကွက်၊ ကလုံးထာ၊ မြေးခံဘော်ဟူ၍ စခန်းခွဲ(၁၀)ခုဖြင့် နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သစ်တောအမျိုးအစားနှင့် ဖုံးလွှမ်းမှု ၇။	တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းအတွင်း အဓိကအားဖြင့် အမြဲစိမ်းတော(Ever Green) အမျိုးအစား ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပြီး (FRA 2015)အရ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအခြေအနေမှာ - ရွက်အုပ်ပိတ်တော	-	၅၆.၈၆% ရွက်အုပ်ပွင့်တော	-	၁၉.၉ % ခြုံပုတ်တော	-	၁၄.၁၉ % အခြားမြေ	-	၉.၀၅ % သဘာဝသယံဇာတများ ၈။	သဘာဝသယံဇာတများအနေဖြင့်- အပင်မျိုးစိတ်	-	၃၈၄ မျိုး သစ်ခွမျိုးစိတ်	-	၉၀ မျိုး ဝါးမျိုးစိတ်	-	၃၀ မျိုး ကြိမ်မျိုးစိတ်	-	၁၇ မျိုး ဆေးဖက်ဝင်အပင်	-	၃၈၂ မျိုး နို့တိုက်သတ္တဝါ	-	၆၇ မျိုး ငှက်မျိုးစိတ်	-	၂၄၄ မျိုး ကုန်းနေရေနေ	-	၃၀ မျိုး တွားသွားသတ္တဝါ	-	၃၆ မျိုး စီမံကိန်း၏အန္တိမရည်မှန်းချက် ၉။	စီမံကိန်း၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်များမှာ- (က)	အပူပိုင်းမုတ်သုန်သစ်တောကြီးများနှင့် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသော တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များ၊ သဘာဝအပင်မျိုးစိတ်များကို ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းရန်၊ ( ခ)	ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများက သဘာဝကြိုးဝိုင်း နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ၏ တန်ဖိုးကိုသိမြင်နားလည်လာပြီး ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီး (၆)ရပ် ၁၀။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်(၆)ခုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်- (က)	ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကြိုးဝိုင်းအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ လျော့ကျ စေခြင်းဖြင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ နေရင်းဒေသများနှင့် အရေးကြီးမျိုးစိတ်များအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ (ခ)	သဘာဝကြိုးဝိုင်းနှင့် ယင်း၏ သဘာဝသယံဇာတများ အစဉ်တည်တံ့စေရေး ဒေသခံ ပြည်သူများအား ထိရောက်စွာ ပညာပေးစည်းရုံးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လာစေခြင်း၊ (ဂ)	အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအပေါ် ထားရှိသည့် တန်ဖိုးထား မှုနှင့် သဘောထားအမြင်များ မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝ မြှင့်တင်ရေး ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ (ဃ)	သဘာဝကြိုးဝိုင်းအား ထိရောက်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး လိုအပ်သည့် သုတေ သန စစ်တမ်းများကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ (င)	သဘာဝကြိုးဝိုင်းစီမံအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းရေး လိုအပ်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (စ)	သဘာဝကြိုးဝိုင်း ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့် မြန်မာ့ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ စီမံအုပ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၁၁။ စီမံကိန်း၏အန္တိမရည်မှန်းချက်အရ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှု စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူ၍ လုပ်ငန်းအပိုင်း(၂)ပိုင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် ၄င်းတို့၏နေရင်းဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် စခန်းခွဲဧရိယာများအလိုက် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအတွင်း အမဲလိုက်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ် ငါးဖမ်းခြင်းများမရှိစေရန်အတွက် ကင်းလှည့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ သီးသန့်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စိတ်ပါဝင်စားသည့်ဒေသခံ ပြည်သူများအား ကင်းလှည့်ခြင်းသင်တန်းများပေး၍ ပူးတွဲကင်းလှည့် ခြင်း၊ နယ်စပ်ဧရိယာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊ နေရင်းဒေသပြန်လည်တည်ထောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၂။	ထို့အပြင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများစာရင်းကောက်ယူ၍ ရှင်သန်ကျက်စားမှုအလေ့အထများ စူးစမ်း လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ကင်မရာထောင်ချောက်များ တပ်ဆင်လေ့လာခြင်းကို နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ကင်မရာထောင်ချောက်များ တပ်ဆင်လေ့လာခြင်းနှင့် ကင်းလှည့်ခြင်းမှ ရရှိသော ကိန်း ဂဏန်းများကို SMART Database စနစ်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသုံးသပ်၍ ဂေဟစနစ်ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၁၃။	ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြင့်မားရေးအတွက် ထာဝစဉ်တည်တံ့စေမည့် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်ရည်ရွယ်၍ ဝါး၊ ကြိမ်၊ ဝဥ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ စသည့် အသေးအဖွဲသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ် ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက် ရှာဖွေပေး ခြင်း၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် အခြေခံပညာကျောင်း များတွင် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြပွဲပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၁၄။	ထို့အပြင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူအစု အဖွဲ့ပိုင် သစ်တောအသုံးပြုသူများအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ကြက်မောက်၊ ဒူးရင်း၊ ပိန္နဲ၊ မင်းကွတ်၊ ကျွဲကောအစရှိသည့် သီးပင်စားပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ သစ်တောသစ်ပင်များ ဖြန့်ဝေပေး ခြင်း၊ ဝက်မွေးမြူရေး၊ ပျားမွေးမြူရေး၊ ဝဥ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာစိုက်ပျိုးရေးစသည့် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်း များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနှင့် အရင်းမပျောက်မတည်ရင်းနှီးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ တနင်္သာရီသဘာဝကြိုးဝိုင်းစီမံကိန်းဧရိယာရှိ ဒေသခံပြည်သူများသို့ ထောက်ပံ့ခဲ့မှုအခြေအနေ (၂၀၁၁ မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ) ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း •	ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောအသုံးပြုသူများအဖွဲ့စုစုပေါင်း	= ၁၂ ဖွဲ့ •	အသုံးပြုသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း	= ၇၁၁ ဦး •	တည်ထောင်ထားရှိသည့် ကျေးရွာစုစုပေါင်း	= ၉ ရွာ •	စုစုပေါင်း ဧရိယာဧက = ၁၄၀၇၈.၅ ဧက ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု •	သဘာဝတောထိန်းသိမ်းရေး ဧရိယာ	= ၁၀၁၄၆.၅ ဧက (၇၃.၁၅ %) •	ရေထိန်းတော ဧရိယာ	= ၄၆၄ ဧက ( ၃.၃၅ %) •	တန်ဖိုးမြှင့်စိုက်ခင်း ဧရိယာ	= ၂၀၁ ဧက ( ၁.၄၅ %) •	သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ခင်း ဧရိယာ	= ၂၉၀၆ ဧက	(၂၀.၉၅ %) •	သစ်တောစိုက်ခင်း ဧရိယာ	= ၃၆၁ ဧက ( ၁.၁ %) အရင်းမပျောက်မတည်ငွေ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း ၂၀၁၄-၁၅ မှ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ CF အသုံးပြုသူအဖွဲ့ (၁၂) ဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာ(၇)ရွာသို့ စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေ =ကျပ်သိန်း (၁၂၁၀)တိတိ ရေရရှိရေးထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၂၀၁၄-၁၅ မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကျေးရွာ(၇)ရွာသို့ ရေရရှိရေးအတွက်စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေ =ကျပ်သိန်း (၅၆၀)တိတိ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အကျဉ်းချုပ် စီမံကိန်း အမည်- “အာဆီယံ-ကိုရီးယား သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဒေသအဆင့် လေ့ကျင့် ပညာပေးရေး သင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း စီမံကိန်း” (Establishment of ASEAN-Korea Forest Cooperation Regional Education and Training Centre - AFoCo RETC) မျှော်မှန်းချက် -	ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သစ်တောကဏ္ဍလေ့ကျင့်ပညာပေး သင်တန်း ကျောင်းတစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာစေရန် -	အာရှဒေသ ပိုမိုစိမ်းလန်းစိုပြေလာစေရေး ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်များ ဆောင် ရွက်မည့် ခေါင်းဆောင်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် ရည်မှန်းချက် -	သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကို စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင် ပေးနိုင်ရန်၊ -	အာရှဒေသတွင်း ထာဝစဉ်တည်တံ့သော သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်နိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ယက်များ တည်ဆောက်ရန်၊ -	AFoCo အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ခြားနားချက်များကို ကျဉ်းမြောင်းစေရန်၊ -	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ -	ဒေသခံများ၏ စီပွားရေးနှင့် လူနေမှုဘဝ မြင့်မားလာစေရေး အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ကိုရီးယား သစ်တောဌာန (KFS) နှင့် AFoCo Secretariat တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးသင်တန်းကျောင်း (AFoCo RETC) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ-ကိုရီးယား သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်း (AFoCo) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အာရှဒေသအဆင့် သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့အစည်း (AFoCO) သို့ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သောကြောင့် သင်တန်းကျောင်းကို အာရှဒေသ အဆင့် သစ်တောကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး သင်တန်းကျောင်း (AFoCO RETC) ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလအတွင်း AFoCO RETC သင်တန်းကျောင်းတွင် အာရှဒေသတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ သစ်တောကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ သစ်တောပညာရပ် နယ်ပယ်မှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူ များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ တက်သိပညာရှင်များဖြင့် ကာလတို/ ကာလလတ်/ ကာလရှည်အစီအစဉ်များ၊ အထူးသီးသန့် သင်တန်းများ ကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သည့် သင်တန်းများ သင်တန်းကျောင်းတွင် (၁) ရှိရင်းသစ်တောများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် သစ်တောများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း ၊ (၂) သစ်တောမီး စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် (၃) ဒေသခံပြည်သူအခြေပြု သစ် တောစီမံအုပ်ချုပ်မှု စသည့် သင်တန်း ခေါင်းစဉ် (၃) ခုကို အဓိကထားဖွင့်လှစ်ပါသည်။ သင်တန်း ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လအထိ ရှိရင်းသစ်တောများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် သစ်တောများပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း သင်တန်း (၆) ကြိမ်၊ သစ်တောမီး စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းသင်တန်း (၃) ကြိမ်၊ ဒေသခံပြည်သူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်အရ ဒေသခံ ပြည်သူသစ်တော အခြေပြု သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း (၇) ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထူးသီးသန့်သင်တန်း (၈) ကြိမ်၊ ပြည်တွင်း အခြေခံပညာကျောင်းသား/သူ၊ ဆရာ/ဆရာမများ ကိုလည်း တိုးချဲ့ပညာပေးရေးအစီအစဉ် (၂၃) ကြိမ်ခန့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းကာလတွင် ကိုရီးယား သစ်တောဌာန (KFS) နှင့် AFoCO Secretariat တို့ ပူးပေါင်း၍ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်ငယ် (၅) စီးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ အဆိုပါ မီးငြိမ်း သတ်ယာဉ်များအား သစ်တောမီး မကြာခဏ လောင်ကျွမ်းတက်သော ဒေသများရှိ သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောဉီးစီးဌာနများတွင် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) သစ်တောကဏ္ဍအစီရင်ခံစာများ (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်) နှင့် (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်) ထုတ်ပြန်ခြင်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Johannesburg မြို့၌ ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့မြေထိပ်သီး ညီလာခံတွင် တွင်းထွက်သယံဇာတ တူးဖော်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ပွင်းလင်းမြင်သာမှု ဖော်ဆောင်ရေး (EITI) လိုအပ်ကြောင်း စတင်နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ လန်ဒန်မြို့၌ EITI လုပ်ငန်းစဉ်ကို သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများ၊ သယံဇာတတူးဖော်မှု လုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများမှ တရားဝင်သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင် နိုင်ငံပေါင်း (၅၃)နိုင်ငံမှ EITI လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နေ သော်လည်း သစ်တောကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နေသည့် နှစ်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကဏ္ဍ၏ ကောင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု သည် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ EITI သစ်တောကဏ္ဍအစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်းတွင် တက်ကြွစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ EITI သစ်တောကဏ္ဍအစီရင်ခံစာများ (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်)နှင့် (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်) များ အတွက် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ https://www.forestdepartment.gov.mm/books/other/myanmar-extractive-industries-transparency-initiativemeiti2016-2017 https://www.forestdepartment.gov.mm/books/other/myanmar-extractive-industries-transparency-initiativemeiti2017-2018 https://www.forestdepartment.gov.mm/books/other/myanmar-extractive-industries-transparency-initiativemeiti-annex-3rd-and-4th-eiti ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သစ်တောဦးစီးဌာန၏ “The Restoration Initiative (TRI) Myanmar” စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 	TRI-Myanmar စီမံကိန်းသည် ပျက်စီးပြုန်းတီးသွားသော သစ်တောများနှင့် မြေဧရိယာများ အား ပြန်လည်တည်ထောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများ တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 	အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ- ဒေသခံ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောများပျက်စီးပြုန်းတီးနေမှုအား ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ 	စီမံကိန်း ရလဒ်များမှာ- ရလဒ် (၁)	မြို့နယ်(၆)ခုအတွက် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အခွင့်အလမ်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းပညာလမ်းညွှန်ချက်အစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ရန် ရလဒ် (၂)	သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ(၂)ခု၊ ရေဝေရေလဲဧရိယာ(၁)ခု အတွက် ရေမြေတောတောင်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီမံချက်အား ဆောင် ရွက်ရန်၊ ရလဒ် (၃)	သစ်တောပြုန်းတီး၍ တောအဆင့်အတန်းကျဆင်းနေသော ဧရိယာ ဟက်တာ (၉,၀၀၀၀) အား ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရလဒ် (၄)	ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတန်(၃)သန်းအားလျော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။ 	စီမံကိန်းကာလ စီမံကိန်းကာလမှာ (၄)နှစ်ဖြစ်ပြီး GEF-6မှ ထောက်ပံ့မည့်ရန်ပုံငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၆၅၂,၂၉၃ (နှစ်သန်းခြောက်သိန်းငါးသောင်းနှစ်ထောင်နှစ်ရာကိုးဆယ်သုံး) သုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်မည့် ပင်မလုပ်ငန်းများ 	မူဝါဒဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ 	ရေမြေတောတောင်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့် ကနဦး ဆောင် ရွက်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ 	ခိုင်မာသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း။ 	အသိပညာဗဟုသုတများဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာနှင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကသာ၊ကောလင်း၊ ကန့်ဘလူ၊ ကောလင်း၊ ကျွန်းလှ၊ အင်းတော်၊ ထီးချိုင့်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်များတွင် ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ Workplan (ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ) အဓိကလုပ်ငန်းများအကြောင်းဖော်ပြချက် (၁)	မူဝါဒများပေါ်ထွက်လာစေခြင်းနှင့် တိုးတက်လာစေခြင်း MRRP (Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme) (မြန်မာ နိုင်ငံသစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ တွင် နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (Project Steering Committee) ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းအကြံပေးအဖွဲ့ (Technical Advisory Group) ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ (၂)	ရေမြေတောတောင်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့် ကနဦးဆောင် ရွက်ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း သစ်တောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် စိုက်ခင်းဟောင်းများ ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သဘာဝတော တန်ဖိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဓမ္မတာမျိုးဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကြိုးဝိုင်းနယ်နိမိတ် ပြင် ဆင်ခြင်း၊ အကွက်နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောတည် ထောင်ခြင်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ(၂)ခု (ချပ်သင်းဘေးမဲ့တော၊ အဆိုပြု ဇလုံ တောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်) တွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဒေသခံ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏လူနေမှုဘဝ မြင့်မားလာ စေရန်သင်တန်းများပေးခြင်း (ဥပမာ-ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည် ထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ) ၊ Carbon ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ သီးနှံသစ်တောရောနှော စိုက်ပျိုးခြင်း အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန် လျာထားပါသည်။ (၃)	ခိုင်မာသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ အရင်းအမြစ်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအခွင့်အလမ်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်/မြို့နယ်အဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ရေဝေရေလဲ ဒေသနေရာ သတ်မှတ်၍ PES (Payment for Ecosystem Services) ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ(၂)ခု (ချပ်သင်းဘေးမဲ့တော၊ အဆိုပြု ဇလုံတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်) တွင် ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ကို အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ (၄)	အသိပညာဗဟုသုတများဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စိုက်ပျိုး ရေးနည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေသခံတောင်သူများအား သင်တန်းများပေးခြင်း (Farmer exchange)၊ ဒေသခံတောင်သူအချင်းချင်း အသိပညာများဖလှယ်ခြင်း၊ ရေမြေတော တောင်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အသိပညာဗဟုသုတများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဒေသခံအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ၎င်းတို့၏ လူနေမှုဘဝ မြင့်မားလားစေရန် သင်တန်းများပေးခြင်း (ဥပမာ- ဒေသခံ ပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တော တည် ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ)၊ စီမံကိန်းအား စောင့်ကြည့်လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation) များ ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ မှစ၍ သဘောတူညီချက် အပိုဒ် ၁၆ နှင့် ၁၉.၅ တို့အရ စီမံကိန်းရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် စီမံကိန်း ကာလတိုးချဲ့ခြင်းတို့မှအပ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် (စီမံကိန်း ပြီးဆုံးသည့်နေ့ရက်) အထိ အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်နေမည်ဖြစ်သည်။ Estimated Budget စဉ်	ပထမနှစ် (USD)	ဒုတိယနှစ် (USD)	တတိယနှစ် (USD)	စတုတ္ထနှစ် (USD)	စုစုပေါင်း (USD) လျာထား ဘတ်ဂျတ်	၆၄၄,၈၂၉	၆၈၉,၆၂၅	၇၁၆၂၁၆	၆၀၁၆၂၃	၂၆၅၂,၂၉၃ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း- စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းစီမံကိန်း အပိုင်း (၂)” (Norwegian Institute for Water Research-Integrated Water Resource Management- NIVA-IWRM Phase –II) မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရတို့ အကြား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းတိုးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) တွင် ဆောင်ရွက်မည့် နော်ဝေ-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီ အစဉ်အရ “ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း- စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းစီမံကိန်း အပိုင်း(၂)” (NIVA-IWRM Phase –II) အား (၁၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၀/၂၀၁၉) မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ရေသုတေသနဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ စီမံကိန်းအမည်	-	ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ် ခြင်း - စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သင်တန်း ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်း (အပိုင်း-၂) စီမံကိန်းကာလ	-	၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ (၅နှစ်) စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ	-	အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅) သန်းခန့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှကိုင်တွယ် သုံးစွဲမည့်ငွေ -	အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၂၀,၀၀၀) ခန့် အထောက်အပံ့ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်း	-	နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန စီမံကိန်းဧရိယာ	-	ရွှေကျင်မြစ်၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် တနင်္သာရီမြစ် ရည်ရွယ်ချက်	-	ကုန်းတွင်းရေအရင်းအမြစ်များကို စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်ကို နိုင်ငံအဆင့်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ကျင့် သုံးရန်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် ရေမူဝါဒ လမ်းညွှန်မူ ဘောင်နှင့်အညီ ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ စီမံ အုပ်ချုပ်ရန်။ မျှော်မှန်းရလဒ်များ	-	ရေအရည်အသွေးဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ -	နိုင်ငံအဆင့် ရေဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ -	ရေအရည်အသွေးဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်တစ်ခု တည်ထောင်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်း၊ -	အမျိုးသားအဆင့် ရေမူဝါဒလမ်းညွှန် မူဘောင်အား မြစ်ဝှမ်းဒေသများတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ -	သတ္ထုတူးဖော်လျက်ရှိသောဒေသများတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စောင့် ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီအစဉ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သဘာဝသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း (Project for Capacity Building for Sustainable Natural Resource Management - FDSNR-JICA) ၁။	နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လမ်းညွှန်မှာကြားချက်နှင့်အညီ အင်းလေးကန် ထိန်း သိမ်းရေးအတွက် "သဘာဝသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေး အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း" ကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးအေဂျင်စီတို့အကြား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး၍ စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းလျက် ရှိပါသည်။ ၂။ ၎င်းစီမံကိန်းကို အင်းလေးကန်ဒေသအတွင်း သဘာဝသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့ စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ဒေသခံလူမှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင် ရည်များ မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၃။ စီမံကိန်းကာလသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာ ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ စီမံကိန်းဧရိယာသည် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ အင်းလေးကန်ဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ၅။	စီမံကိန်းတွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်း(၃) ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်- အပိုင်း(၁) သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ အပိုင်း(၂) အင်းလေးကန် ရေဝေရေလဲဒေသထိန်းသိမ်းရာတွင် ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်လုပ် ကိုင်မှုနည်းလမ်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အား မြှင့်တင်ခြင်း၊၊ အပိုင်း(၃)	ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သိပ္ပံနည်းကျ သတင်း အချက်အလက်များ စုစည်းမှု မြှင့်တင်ခြင်း။ ၆။	အပိုင်း(၁) သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါ သည်− -	သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ -	အဝေးမှ စူးစမ်းလေ့လာသည့် နည်းပညာသစ်များအား အဆိုပြု စမ်းသပ် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ -	သစ်တောများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် စီမံချက်များ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ၎င်းစနစ်အား စမ်းသပ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ -	သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင် ပေးခြင်း၊ -	ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း၊ -	ပြန်လည်ဆွေးနွေးအကြံပြုသည့်စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ -	နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့များနှင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍများမှ အထောက်အပံ့များ ရရှိ စေရန် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်း။ ၇။ အပိုင်း (၂) အင်းလေးကန် ရေဝေရေလဲဒေသထိန်းသိမ်းရာတွင် ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်လုပ် ကိုင်မှုနည်းလမ်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါ သည်- -	အင်းလေးကန် စီမံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည့် ခိုင်မာသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တည်ထောင်ခြင်း၊ -	ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ ရွေးချယ်ထားသော ဧရိယာများတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ -	မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ ရွေးချယ်ထားသော ရေဝေရေလဲဒေသများတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ -	သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ သစ်တောအတန်းအစားကျဆင်းခြင်း၊ မိုးလေဝသ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ နှုန်းအနည်ထိုင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း ခြင်းနှင့် ရေမြေအပိုင်းအခြားအလိုက် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အခြေခံသတင်းအချက်အလက် စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ -	ဘက်စုံ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ရေဝေရေလဲ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း၊ -	အခြား အထူး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၈။ အပိုင်း(၃) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့် သိပ္ပံနည်းကျ သတင်း အချက်အလက်များ စုစည်းမှု မြှင့်တင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်− -	သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောသုတေသနဌာနတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နမူနာများ ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စင်တာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ -	ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနမူနာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းသိုလှောင်သည့် စနစ် တည်ထောင်ခြင်း၊ -	ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နမူနာများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင် ခြင်း။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
FDCCA စီမံကိန်းအကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ် - ဒိန်းမတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် (Denmark-Myanmar Country Programme Document 2016-2020) အား နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံရုံးတို့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းသဘောတူညီချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ဒိန်းမတ်သံရုံး နှင့် သစ်တောဦးစီးဌာနတို့အကြား ဒီရေတောစီမံကိန်းတစ်ရပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၉) ရက် နေ့ရက်စွဲဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကူအညီပေးရေး သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို (Development Engagement Document) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ - အဆိုပါသဘောတူညီချက်အရ ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေဒေသခံပြည်သူများ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနှင့် အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာ ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်ရေးနှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအပေါ် မှီခိုမှု လျော့နည်းလာစေပြီး အခြားဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးတို့အတွက် ဒီရေရောက် သစ်တောများကို စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ “ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေ ပြည်သူ လူထုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေရပ်တည် နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေ ရောက်သစ်တောများကို စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းစီမံကိန်း (Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forests)” ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ - စီမံကိန်းအမည် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေ ပြည်သူလူထုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေရောက်သစ်တောများကိုစနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း စီမံကိန်း” (Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Inproved Management of Mangrove Forests) - စီမံကိန်းဧရိယာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်နှင့် စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်။ - စီမံကိန်းကာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ၅ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ - စီမံကိန်းရန်ပုံငွေ ဒိန်းအမတ်အစိုးရ၏ Clmate Change Envelop အစီအစဉ်အောက်မှ ဒိန်းမတ်ငွေကြေး (ဒိန်းမတ် ခရိုနော်) DKK ၃၅ သန်းနှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅.၅) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ - အန္တိမရည်မှန်းချက် (Overall Outcome) ဒီရေတောများအား ရေရှည်တည်တံ့သည့်နည်းဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်၍ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနေ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရှင်သန်ရပ်တည်နှိုင်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ - မျှော်မှန်းရလဒ် (၁) - ဒီရေတောများ စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးနှင့် ဒီရေတောထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - မျှော်မှန်းရလဒ် (၂) - သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ် များ၏ အကူအညီဖြင့် ဒီရေတောများအား ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခြင်း၊ - မျှော်မှန်းရလဒ် (၃) - ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပျက်စီးသွားခဲ့သော ဒီရေတောဧရိယာများတွင် ဒီရေတောများ ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - မျှော်မှန်းရလဒ် (၄) - ဒီရေတောများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ဒေသခံပြည်သူတို့၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို ကြံ့ကြံ့ခံတုံ့ပြန့်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများ - စီမံကိန်းခရိုင်များ၌ ဒီရေရောက်သစ်တောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆောင် ရွက်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် သင်တန်း (၆)မျိုးကို (၁၈)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ - သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်လွယ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းကို စီမံကိန်းကျေးရွာ (၃၁)ရွာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရလဒ်များကို အစီရင်ခံစာများ ရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာနှင့် ကြီးကြပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် မော်တော် ကား (၂) စီး၊ Speed Boat (၂) စီး၊ Drone (၄) စုံ၊ GPS (၁၅) လုံး၊ ကင်မရာ (၄) လုံး၊ Laptop ကွန်ပျူတာ (၄) လုံးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စီမံကိန်းဒေသများသို့ ဝယ်ယူဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ - ကျောက်ဖြူခရိုင်တွင် အသိပညာပေးသစ်တောစခန်း (၁) လုံး (၆၂'×၅၆'×၃၄' RCC–၂ ထပ်) တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး စစ်တွေခရိုင်တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသော အသိပညာပေးသစ်တောစခန်းမှာ (၇၅%) တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ - စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် ဒီရေတောထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တိုးချဲ့ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ - စစ်တွေခရိုင်တွင် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၃) ခု ၊ မြိတ်ခရိုင်တွင် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၂) ခု ဖွဲ့စည်း ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ဖြူခရိုင်တွင် မင်းကြောင်းကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအား (၁၇၆၂) ဧက တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ - ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ပညာ ပေးဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊ စစ်တွေခရိုင်နှင့် မြိတ်ခရိုင်တွင် အသုံးပြုသူများအဖွဲ့ စုစုပေါင်း (၁၂)ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး၊ တည်နေရာရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသစ်တော ပျိုးဥယျာဉ် (၁၀) ခု တည်ထောင်ခြင်း ၊ ပျိုးပင်ဖြန့်ဝေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ - စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့တွင် ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းနှင့် သဘာဝတော တန်ဖိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၂၂၅) ဧက ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ - စီမံကိန်းကျေးရွာ (၃၁)ရွာတွင် ကျေးရွာအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်ရေး စီမံ ချက်များ ရေးဆွဲခြင်းကို စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီး အခြေစိုက် NGOs (၃)ဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ - ဝင်ငွေတိုးအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် ကဏန်းမွေးမြူရေးခြံ (၁၂)ခြံ တည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် ရေချိုရရှိရေးအတွက် ရေတွင်းရေကန် (၂)ကန်အား တူးဖော်ပေးခဲ့ပြီး စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများအလုံးရေ (၂၂၀၀) ဖြန့်ဝေရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၊သစ်တောသုတေသနဌာနစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ( Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607) စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ၊သစ်တောသုတေသနဌာနစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ( Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607)စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရေဆင်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO)စီမံကိန်းကာလ - ၁-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ (၁ နှစ် ၈ လ)အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် FAOဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - သစ်တောသုတေသနဌာနမှ သုတေသီများ၏ စွမ်းဆောင် ရည် တိုးတက်မြင့်မားစေရန် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း(က) Biodiversity Conservation and Forest Dynamics (16-26 July)(ခ) Climate Change and Carbon Accounting (16- 26 July)(ဂ) Agroforestry Practices (22 July-2 Aug)(ဃ) Extension (23-27 July) (င) Plant Taxonomy (1-11 Aug)(စ) Wood chemistry(ဆ) Wood Drying(ဇ) Nursery Techniques Wood-based Panels(စျ) Research Methodology(ည) Statistics(ဋ) Management of Invasive alien species(ဌ) Teak tissue culture(ဍ) Wood anatomy(ဎ) Seed Conservationသစ်တောသုတေသနအတွင်း တပ်ဆင်ထားရှိသည့် အင်တာနက်စနစ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သစ်တောသုတေသနဌာနအတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်း များဝယ်ယူခြင်း၊ သုတေသီမျာအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်းဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Lists of Projects being implemented in cooperation with International Organization (July, 2018) Lists of Projects being implemented in cooperation with International Organization (July, 2018) Taninthayi Nature Reserve Project –TNRP: Moattama Gas Transportation Company -MGTC၊ Taninthayi Pipeline Company -TPC၊ Andaman Transportation Limited - ATL	Latt Htoke and Htet Lan Kan Community Forest Plantation Project: Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center- JIFPRO Myanmar Stove Campaign: Mercy Corps Program on sustainable use of plant resources with particular emphasis on the medicinal plants on botanical inventory and subsequent evaluation: Japan International Cooperation Agency- JICA, Makino Botanical Garden- MBK, Japan Collaboration Program to support the Conservation of Marine and Terrestrial Biodiversity in the Tanintharyi Region: Fauna and Flora International-FFI Capacity Building, Research and Development Activity of Mangrove Reforestation and Conservation of Endangered Orchid Species in Myanmar: Worldview International Foundation-WIF၊ Worldview Myanmar Limited-WML Cooperation Concerning Biological Resources and Information: National Institute of Biological Resources of the Republic of Korea-NIBR The establishment of ASEAN-ROK Forest Cooperation Regional Education and Training Centre (AFoCo RETC): Korea Forest Service-KFS Cooperation on the implementation of Small Grant Programmes in ASEAN Heritage Parks of Myanmar: ASEAN Center for Biodiversity-ACB .	Upscaling Dissemination of Improved Cookstoves in Myanmar through Replication of Best Practices from the Region: GROUP FOR THE ENVIRONMENT, RENEWABLE ENERGY AND SOLIDARITY-GERES Strengthening Sustainability of Protected Area Management in Myanmar: Global Environment Facility-GEF Conservation of Biodiversity and Improved Management of Protected Areas: Norwegian Environment Agency-NEA Integrated Water Resources Management-Institutional building and training: The Government of the Kingdom of Norway Capacity Building of Relevant Stakeholders for REDD+ Readiness of Myanmar: Korea Forest Service-KFS Cooperation in the field of the Conservation of Sun Bear in Myanmar: Istituto Oikos FD-KNA Project Collaboration Research on Plant and Seed Conservation: The Korea National Arboretum of the Korea Forest Service- KNA Biodiversity Conservation and Research Cooperation Project: The Chinese Academy of Sciences-CAS REDD+ Himalayas: Developing and using experience in implementing REDD+ in the Himalayas: International Centre for Integrated Mountain Development-ICIMOD .	Biological Inventory for updating the Flora and Fauna of Myanmar: National Museum of Nature and Sciences-NMNS, Japan OneMap Myanmar: Swiss Agency for Development and Cooperation-SDC DAFNE- Women, Environment and Community Forests for food security in Rakhine: Italian Development Cooperation Agency Responsible Asia Forestry and Trade Phase III Cooperation in the field of the Biodiversity Conservation in Myanmar: Istituto Oikos Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (GCP/ MYA/ 017/GEF): Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Genetic Research in Slow Loris in Myanmar: Jikei University School of Medicine, Core Research Facilities (Division of Molecular Cell Biology) Cooperation in the field of Wildlife Conservation in Myanmar: Wildlife Conservation Society-WCS Cooperation in Snow Leopard in Myanmar: Panthera Cooperation Research on Botanical Diversity of Myanmar’s Northern Forest Complex: The New York Botanical Garden-NYBG NestingaREDD+ Project Carbon Accounting and Monitoring System Under the (Sub-) National System: Forest and Forest Products Research Institute- FFPRI Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmar: Fauna and Flora International- FFI Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Change: University of British Columbia (UBC) Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreement: Department for International Development- DFID (UK) FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement: Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607): Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmar: Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) and The University of Queensland (UQ) Capacity Building for Strengthening Transboundary Biodiversity Conservation of the Tanintharyi Range in Myanmar: International Tropical Timber Organization-ITTO Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI): Natural Resources Institute Finland (LUKE) Understanding the drivers of deforestation in Myanmar: National University of Singapore (NUS) Voices for Mekong Forests: RECOFTC၊ WWF၊ MERN Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forests: DANIDA ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေပြည်သူလူထုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရပ်တည်နေထိုင် နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေရောက်သစ်တောများကိုစနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမည်- ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေပြည်သူလူထုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရပ်တည်နေထိုင် နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေရောက်သစ်တောများကိုစနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းစီမံကိန်း - Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forestsစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ကျွန်းစုမြို့နယ်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - DANIDA ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၈ခုနှစ် မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ(၅)နှစ် အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း များ - ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒီရေ ရောက်သစ်တောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြင်ပလူမှုရေး နှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၏ အကူအညီဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရွေးချယ်ထားသည့်ဧရိယာများ၌ ဒီရေရောက်သစ်တော များ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ စီမံကိန်း၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဒီရေရောက်သစ်တောသယံ ဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းလာစေပြီး ရာသီ ဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကို ကြံကြံခံတုံ့ပြန်နိုင်သည့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့များ တိုးပွားလာစေရန် ဆောင် ရွက်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း NGOs များနှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၅၃၉၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ Voices for Mekong Forests စီမံကိန်းအမည် - မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ - Voices for Mekong Forestsစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - တနင်္သာရီ-ဒေါနတောင်တန်းဧရိယာ (တနင်္သာရတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်)စီမံကိန်းကာလ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တွင် ထားဝယ် ခရိုင်နှင့် မြိတ်ခရိုင်တို့တွင်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ (၅)နှစ် အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာန၊ RECOFTC၊ WWF မြန်မာနိုင်ငံ အစီအစဉ်နှင့် MERNဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ သစ်တောစီမံ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊  သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ခိုင်မာလာစေခြင်း၊  ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တရပ် ပေါ်လာစေရန် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ (FLEGT) လုပ်ငန်းများ၊ REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခွင့် အလမ်း များဖန်တီး ပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များအကြား သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ အတွေ့ အကြုံနှင့် ကောင်းမွန်သောစနစ်များ မျှဝေနိုင်သည့် ကွန်ယက်များ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ဦးအောင်ကျော်နိုင်၊ ၀၉ ၇၉၇၇၀၀၈၃၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အကြောင်းအရင်းများအားလေ့လာခြင်းစီမံကိန်း Understanding the drivers of deforestation in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အကြောင်းအရင်းများအားလေ့လာခြင်းစီမံကိန်း Understanding the drivers of deforestation in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - စင်ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Education, Singapore)စီမံကိန်းကာလ - ၁/၂၀၁၈ မှ ၁၂/၂၀၁၈ ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် National University of Singapore (NUS)ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက သစ်တောပြုန်းတီးမှုဖြစ်စေ သည့် အကြောင်းရင်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုအကြောင်းရင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည့် အကြောင်းတရားများအား လေ့လာခြင်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှု အား လေ့လာခြင်း၊ အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ရွှေတူးဖော်မှုများနှင့် ၄င်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းများအား လေ့လာ ခြင်း၊ အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စား ရွှေတူးဖော်မှုများ အား စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား လေ့လာခြင်း၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောသယံဇာတ စာရင်းကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI) စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောသယံဇာတ စာရင်းကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI)စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - နေပြည်တော်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Natural Resources Institute Finland (LUKE)စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် နှင့် LUKE ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - သင်တန်းများပို့ချခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သယံဇာတဌာနခွဲ၊စာရင်းကောက် ဌာနစိတ်၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၅၁၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း - Capacity Building for Strengthening Transboundary Biodiversity Conservation of the Tanintharyi Range in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တနင်္သာရီ တောင်တန်းဒေသအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပူပိုင်းဒေသသစ်နှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်း (ITTO) စီမံကိန်းကာလ - ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့် ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် သုတေသန လုပ် ငန်းများ သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်အတွက် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ဌာနများဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကနဦး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများအနီးရှိ သစ်တော အပေါ် မှီခိုနေသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ လူနေမှု ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒီရေတော များ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း စီမံကိန်း - Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒီရေတော များ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း စီမံကိန်း - Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ပျဉ်ဒရယ်ကြိုးဝိုင်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) and The University of Queensland (UQ)စီမံကိန်းကာလ - ၁/၂၀၁၈ မှ ၁၂/၂၀၂၀ အထိ (၃)နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် The University of Queensland, Australiaဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းနေရာများတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်ဒီရေတောများ စီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာ အသေးစားစီမံချက်များ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်း၊  စီမံကိန်းဧရိယာများ၌ စံပြအကွက်ငယ်များ ပါဝင်သည့် ဒေသ ခံများ ပူးပေါင်းပါဝင်သော ဒီရေတော စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သရုပ်ပြကွက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ခြင်း၊  စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှီးနှော ဖလှယ်နိုင်ခြင်း၊  ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၅၁၁၅၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
FAO သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင် ရာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက်အစီအစဉ် - FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement စီမံကိန်းအမည် - FAO သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင် ရာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက်အစီအစဉ် - FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreementစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိအကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - တရားမဝင်သစ်ထုတ်ခြင်းများ လျော့ကျရေးဆောင်ရွက်မှု များ၊ FLEGT၊ REDD+၊ Forest Tenure နှင့် မြေယာအခွင့် အရေးများနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ၊ အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်း၊ သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အထောက် အကူပေးခြင်း၊ FLEGT လုပ်ငန်းစဉ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်အား အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အကူအညီပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်း သစ်ဈေးကွက်ပြောင်းလဲနေမှုများ၊ တရားဝင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ရန် အခက်အခဲများအား လေ့လာ စစ်ဆေးခြင်း၊ SME များအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ တရားဝင်သစ်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား များ၊ SME လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ချေများ သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးများအား တိုးမြှင့် ပေးခြင်း၊ တရားဝင်သစ်ထုတ်ခြင်း၊ သစ်ထုတ်ခြင်း ကွင်းဆက်နှင့် ရောင်းချခြင်းတို့တွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိစေခြင်းတို့ အားကောင်းလာစေခြင်း၊ FLEGT လုပ်ငန်းစဉ်၏ လူငယ်များ၊ အသေးစားအလတ် စားလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၀၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ် - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreement စီမံကိန်းအမည် - သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ် - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreementစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အားလုံး၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Department for International Development- DFID (UK)စီမံကိန်းကာလ - ၆/၂၀၁၆ မှ ၅/၂၀၁၉အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - အစိုးရကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - MSG ဖွဲ့စည်းခြင်း MSG ToR မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများအား တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် ကျင်းပခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များအား တရားဝင် အတည်ပြုခြင်း - MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကဏ္ဍတစ်ခုစီ အတွက် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးစီ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များသတ်မှတ်ခြင်း - သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အခြေခံမူဝါဒများ၊ တာဝန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုး သားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား(မူကြမ်း) အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အတည် ပြုခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏ VPA ကတိကဝတ်များ သဘောထား ထုတ် ပြန်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ VPA ဆောင်ရွက်ရခြင်း၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်ဖော်ထုတ်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် VPA လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းသည့် နိုင်ငံအဆင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း - တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း/ Matrix မူကြမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ MSG သို့ CoC Dossier ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် MSG မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ CoC သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် (online မှ ဖြန့်ဝေခြင်း အပါ အဝင်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် CoC စတင်ဆောင် ရွက်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ အပါအဝင် TLAS လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထိရောက်ရိုး ရှင်းသော CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း၊ နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ အသုံးပြုရေး ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - VPA စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး လမ်းပြမြေပုံပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း - စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း CSO နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်/ ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အတွက် အစိုးရကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ - FLEGT ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် website တည်ထောင်ခြင်း Website တည်ထောင်ခြင်း - တီရှပ်၊ သော့ချိတ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ တံဆိပ်စသည်ဖြင့် သိသာမြင်သာ အောင် မြှင့်တင်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုဆိုပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် MSG ဖွဲ့စည်းခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း ITF အဖွဲ့ဝင်များအား နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း၊ Media သို့ အသိပေးခြင်း - TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း TV Talk Show အတွက် Facilitator တစ်ဦးရွေးချယ်ခြင်း၊ TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း - ကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ၊ သင်တန်း များ၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း - EUTR/ VPA/ FLEGT အကြောင်းကို ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက်စေရန် မီဒီယာကဏ္ဍအတွက် FLEGT နှင့်ဆက် စပ်သော အသိပညာပေး သင်တန်းများပေးခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များအား မီဒီယာသင်တန်းပေးခြင်း၊ မီဒီယာ သမားများ အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း - လက်ရှိဖော်ထုတ်ထားသော ပဋိပက္ခအကြောင်းအရင်းများ အား ဒေသအလိုက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် ဆက်လက် ဖော်ထုတ် လေ့လာ ခြင်း ကနဦးလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာပြင်ဆင် ခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များ၌ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ အကြား VPA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ချိတ်ဆက်မှု ရှိစေခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေး နွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ NCA/ UPDJC/ JMC တို့၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း - FLEGT VPA၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ တရားဝင်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု အခြေခံသဘောတရားများ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ အစည်းအဝေး များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ အစည်း အဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆက်စပ်ပတ် သက်သူ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲ များကျင်းပခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့်နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်တွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ FLEGT အခြေခံသဘော တရားများကို သင်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်း (ToT) သင်တန်း ပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား CoC ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသို့ CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်း များပြင်ဆင်ခြင်း သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်းများ ပြင် ဆင်ခြင်း၊ သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြား IEC ပစ္စည်းများ ကို ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း - အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများ (ဂါနာနိုင်ငံ) နှင့် အာရှနိုင်ငံများ (လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ)သို့ လေ့လာရေး ခရီးသွားရောက်ခြင်း အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက် ခြင်း - အဆိုပြုလွှာရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များစိစစ်ခြင်း အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်း - တာဝန်ခံမှုရှိသောထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေပေးအပ်မှုထုတ်ပြန်ခြင်း အဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူများထံ ရန်ပုံငွေပေးအပ်ခြင်း)ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၀၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အာရှ-ပစိဖိတ် သစ်တောများ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူ လိုက်လျောညီထွေရှိစေခြင်း စီမံကိန်း - Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Change စီမံကိန်းအမည် - အာရှ-ပစိဖိတ် သစ်တောများ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူ လိုက်လျောညီထွေရှိစေခြင်း စီမံကိန်း - Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Changeစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - University of British Columbia (UBC)စီမံကိန်းကာလ - ၈/၂၀၁၇ မှ ၁/၂၀၁၉ ထိ အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် University of British Columbia (UBC)ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျွန်းစိုက်ခင်းများအပေါ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောဧရိယာအားလုံးအတွက် မတူညီ သော ဂေဟစနစ်များ၏ ပျံ့နှံ့တည်ရှိမှုနှင့် ပထဝီအနေ အထား ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လေ့လာခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အခြေခံသော နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ (အပင် အမြင့် ကြီးထွားမှု၊ သစ်တောသယံဇာတ ကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ၊ ဇီဝဒြပ်ထုများ၏ တိုးပွားနှုန်း၊ မြေဆီလွှာ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် သစ်မျိုးများ၏ အချက် အလက်များ)ကို စုဆောင်းဖလှယ်ခြင်း၊ အခြေခံမူများနှင့် အလားအလာရှိသော လိုက်လျောညီထွေ ရှိစေရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်နိုင်ရန် အကြံဉာဏ်များနှင့် အချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း၊ ညီလာခံများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေ ခြင်း၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေနှင့် အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း - Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmar စီမံကိန်းအမည်- မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေနှင့် အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း - Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်အဖွဲ့ (Fauna and Flora International- FFI)စီမံကိန်းကာလ - ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၁၀-၂၀၂၂ အထိ (၅)နှစ်အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် FFI ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ - နိုင်ငံအတွင်း ဦးစားပေးမျိုးစိတ်များ၊ ဂေဟစနစ်များ၊ သဘာဝ နေရင်းဒေသများနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အဏ္ဏဝါနှင့် ကုန်းမြေပိုင်းဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းနှင့် မျိုးစိတ်များနှင့် ဂေဟစနစ်များ ထိန်းသိမ်းထားမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သဘာဝနယ်မြေများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုပံ့ပိုး ခြင်း၊ ဒေသခံများ အခြေပြု ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းသစ်တို့ဖြင့် သဘာဝ နယ်မြေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည် တည်တံ့စွာ အသုံးချခြင်းတို့တွင် နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ သစ်တောများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ် ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချခြင်း တို့တွင် နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စံပြနမူနာပုံစံငယ်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် နည်းပညာအထောက်အပံ့၊ သင်တန်းနှင့် ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေး ခြင်းတို့ဖြင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးတွင် အထောက်အကူပြုစေရန် သဘာဝနယ်မြေများနှင့် အနီးရှိဒေသခံများ၏ လူနေမှုဘဝ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒေသခံအခြေပြု ကမ်းရိုးတန်းဒေသ အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ကူညီခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ မျိုးစိတ်များ၊ ဂေဟစနစ် များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် နိုင်ငံနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် မူဝါဒများ၊ မဟာ ဗျူဟာများနှင့် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းကို ပံ့ပိုးခြင်း၊ နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း စီမံချက်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ် များအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ပံ့ပိုးခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာသုတေသနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်